Indlela yexesha elidlulileyo, langoku, kunye nexesha elizayo kumaxesha afanelekileyo
Izenzi zixelela ixesha ngomgangatho owaziwa njenge ixesha. Ngaphambi kokuba ufikelele kwi-tranquilizer, nantsi i-lowdown kumaxesha asisiseko. Amaxesha amathathu asisiseko edlulileyo, yangoku, kwaye ikamva, kwaye nganye ineefom ezimbini-i-carb ephantsi kunye ne-gluten-free. Uxolo, ngokucacileyo (ixesha layo elisisiseko elichongiweyo- langoku, elidlulileyo, okanye elizayo) kunye inkqubela phambili (i -ing uhlobo lwesenzi).
Ukuqhubela phambili kugxininisa ngakumbi kwinkqubo okanye kwizenzo ezihamba ixesha, kwaye inkqubela phambili yangoku inokufikelela kwikamva. Kwizivakalisi ezininzi kungasetyenziswa ngokungafaniyo. Nantsi incasa nganye:
Ixesha elidlulile isixelela ngokwenzekileyo ngexesha elithile, elidlulileyo okanye ichaza indlela yokuziphatha ngaphambili. Kwisivakalisi UDiane wenza iteki ekhakhayini kwingalo yakhe, kudwelisiwe sisenzi esidlulileyo. Kwi Ngexesha loMnyhadala weSithuthuthu, uDiane wayeguqula i-bicep yakhe, yayitshintsha Isenzi kwixesha elidlulileyo eliqhubekayo.
Kwisimo sangoku ikuxelela okwenzekayo ngoku ngoku Okomzuzwana, okanye ngokuthetha ngokubanzi, leliphi inyathelo eliphindaphindayo. Kwisivakalisi UGrace ukhwele ibhayisekile yakhe, ukukhwela sisenzi sexesha langoku. Kwi UGrace usoloko epolisha ibhayisekile yakhe kwaye UGrace ukhwele eFlorida, izenzi ipolisha kwaye uyakhwela zikwixesha langoku eliqhubekayo.
Ixesha elizayo ihamba iye kumhlaba wokuvumisa. Isenzi kwi UGrace uya kunika uDiane ukukhwela ejikeleze ibhloko ngu ndiya kunika, kwixesha elizayo. Kwi UGrace uya kuqhayisa ngesithuthuthu sakhe esitsha iinyanga, uya kuqhayisa lixesha elizayo eliqhubela phambili.
Ukulandela isivakalisi, uyabona engenasiphelo (utatomkhulu wosapho lwesenzi ngasinye, imo yesenzi eyandulelayo ukuya ). Hlala kolo sapho xa ugcwalisa okungenanto, ukhethe ixesha elichanekileyo.
UDavid unethemba lokuba le fashoni ilandelayo __________________ yomntu okhulileyo, okweqanda okweyakhe. (ukucoca)
Kwiintsuku ezimbini emva kokuthenga kukaDiane, uGrace __________________ malunga nemiboniso-bhanyabhanya abachitha ixesha elininzi kwiimpahla zabo kuneplagi zabo. (Kumama)
Iimpendulo zokuziqhelanisa nemibuzo
uya kuncoma. Isitshixo nantsi Okulandelayo, ebeka isivakalisi kwixesha elizayo.
Ebengxola okanye wayencwina. Isalathiso sexesha elidlulileyo kwiintsuku ezimbini emva. Impendulo yesibini inika ngakumbi ukuba ukhona uziva, kodwa nokuba ichanekile.
I-prednisone yedosi yepakethi yedosi
Ngaba iikati zingathatha i-clindamycin
iziphumo ebezingalindelekanga zehydrochlorothiazide
ithamo lokunyanga lamictal